ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား? အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေပါ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ငါတို့ရှိသမျှသည်အဖော်နှင့်ဆက်သွယ်မှုပြိုကွဲခဲ့ပြီးအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးအလုပ်မလုပ်သေးသောမိတ်ဖက်တစ် ဦး ရှိသည်။ ဒီကိစ္စမှာ, မင်းရဲ့ဟောင်းအိမ်ပြန်သွားပါ တစ်ခုမှာပြိုကွဲမှုအခြေအနေနှင့်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေါ် မူတည်၍ ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့သောအချစ်ဇာတ်လမ်းများသည်ဒုတိယအကြိမ်တွင်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အခြားသူများမှာမူပထမနိဂုံးထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အခြေအနေကိုဖြတ်သန်းလေ့ရှိသည်။
အချို့ကျွမ်းကျင်သူများသည်လက်ရှိအခြေအနေ၌သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းနှင့်ပြန်လည်ပတ်ခြင်း၏အားသာချက်များကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာနောက်တစ်ခါထပ်ကြိုးစားဖို့ကြိုးစားသူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာပျော်ရွှင်ကြလို့ပါ။ မင်းကအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်နေပြီးပြန်လာတဲ့နေရာမှာစွဲမက်စရာ၊ အဆိပ်ဆက်ဆံရေးရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဆက်ဆံရေးသည်အပြုသဘောဆောင်ပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်နားလည်မှုရှိလျှင်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်တတိယအခွင့်အလမ်းမရှိပါ။
အကယ်၍ သူတို့ကဒီဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်အိပ်ရာပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ လိင်အပြင်ဘက်မှာဖြစ်စေနေ့စဉ်ဘ ၀ မှာဖြစ်စေတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ပါ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောစားသောက်ဆိုင်သည်သူသို့မဟုတ်သင့်အားသူမုန်းတီးသောအရာသည်သင်မှန်းဆရန်မလိုတော့ပါ။ ဒုတိယပတ်၏ပထမနှစ်ပတ်လည်လက်ဆောင်ကိုသင်လက်လွတ်မည်မဟုတ်။ ယခုဤအဓိကမေးခွန်းများသည်သင်မပြန်မီမေးမြန်းသင့်သည်။ သင်နှင့်အတူပြန်သွားခြင်းသည်သိပ္ပံပညာအရပိုမိုပြင်းထန်နိုင်သည်။ ဤအခြေအနေကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသူများအတွက်သူတို့ကဤသို့ပြောကြသည် ဒါဟာပိုပြီးရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပြင်းထန်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်မိတ်ကပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဟော်မုန်းအချို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအရာအားလုံးသည် ဦး နှောက်တွင်းရှိဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ချစ်သူများသည်၎င်းတို့ပျောက်ဆုံးနေသောအရာတစ်ခုခုကိုပြန်လည်ရရှိခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုစိတ်အားတက်ကြွစေသည်။ သင်၏ဟောင်းနှင့်ပြန်လည်ရခြင်း၏အားသာချက်တစ်ခုမှာသင်သည်ထပ်တူအမှားမျိုးမကျူးလွန်ရန်ဖြစ်သည်။
ယခင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး သို့ပြန်သွားခြင်းသည်ရင့်ကျက်သောအပြုအမူဖြစ်ပြီးသင်တည်ငြိမ်မှုဆီသို့ခြေလှမ်းများလှမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုညွှန်ပြသည်။ အကယ်၍ နောက်ဆုံးချိုးဖောက်မှု၏အကြောင်းရင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိလျှင်, သူတို့သည်ထပ်တူအမှားမျိုးထပ်မံကျူးလွန်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲဆက်ဆံရေးသည် ပိုမို၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလိမ့်မည်။ "သမိုင်းကိုနားမလည်သူများသည်အမှားများကိုထပ်တူထပ်ခါထပ်ခါကျူးလွန်ရန်ကြံစည်ထားကြသည်" ဟူသောစကားစုသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနယ်ပယ်တွင်အဓိပ္ပာယ်အသစ်တစ်ခုရှိသည်။ ဤအချိန်၌သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းသည်ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိင်အပြည့်ရှိခြင်း၊ ပconflictsိပက္ခများမရှိဘဲ၎င်းတို့အားထပ်မံအဆုံးသတ်စေပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ထပ်မံလက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ခွဲနေပြီးနောက်အတူတကွနေထိုင်သောမိတ်ဆွေအချို့နှင့်မသက်မသာခံစားရပါကအခြေအနေသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီးအတိတ်မှမိတ်ဆွေများအတူတူပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိမ့်မည်။ သင်၏မိဘများနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုမိတ်ဖက်အသစ်များနှင့်ပြန်လည်မိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကောင်းကျိုးများစွာရရှိနိုင်သကဲ့သို့အားနည်းချက်များလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များလည်းအခြားရှုထောင့်အဘို့ဤအပိုင်းကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ မှီခိုမှုသည် dopamine နှင့် oxytocin အရောအနှောကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း။ ၎င်းသည်အတိတ်ကာလမှဆက်ဆံရေးသို့ပြန်လာသောလူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဟောင်းနွမ်းပြန်ယူခြင်းကသင်သည်ဤအရာ ၀ တ္ထုများအပေါ်မှီခိုနိုင်ပြီးသံသရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
ဒါဟာအတွေ့အကြုံအတူတူမဟုတ်ကြောင်းဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံမောင်နှံတစ်စုံသည်ပြိုကွဲပြီးနောက်ပြန်လာသည့်အခါ၎င်းသည်လွမ်းဆွတ်မှုသို့မဟုတ်သူတို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြသော်လည်းဖြစ်ရပ်မဟုတ်သည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခု၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ များစွာသောဇနီးမောင်နှံများသည် ထပ်မံ၍ ကြိုးစားရန်ကြိုးစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြproblemနာကအရာရာသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ဟုထင်မြင်သောဤသဘောထားသည်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည် ဖြည့်ဆည်းရန်အစေခံမမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူစိတ်ပျက်။ ထို့အပြင်နှစ် ဦး စလုံးသည်အခြားအကျိုးစီးပွားများရှိနိုင်သည်၊ သူတို့သည်သူတို့၏ဘဝအတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့အရင်ကကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုရိုးရှင်းစွာနားလည်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုထပ်နိမ့်အရည်အသွေးဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခြင်းမှဆင်းအနာဆိုး။
သင်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအမှတ်အသားပြုရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ယခင်သူနှင့်ပြန်သွားပါကသင်သည်အခြားသူနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆုံးရှုံးသည်။ ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုထပ်မံလုပ်ခြင်းသည်သင်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုသိပြီးသင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုကန့်သတ်ရန်တံခါးကိုပိတ်နေကြောင်းဖော်ပြသည်။ တခါတရံသက်သောင့်သက်သာရှိသည့်နေရာမှထွက်ရန်ခက်ခဲသော်လည်းလူအများစုသည်ထိုအချိန်ကတည်းကပင်အတူတူပင်ဆက်ဆံရေးပြန်ရခဲ့ကြသည် သူတို့ဟာမလုံခြုံဘူး၊ သူတို့မှာအာမခံထားထားပြီးပြီ.
အားနည်းချက်တွေထဲကတစ်ခု၊ ဒီဟာကပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်။ မင်းအရင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့သူနဲ့ပြန်ချင်ရင်သူတို့ဟာရန်သူတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလေ။ သို့သော်စုံတွဲတစ်တွဲပြန်ဖြစ်လာသောအခါဇာတ်လမ်းသည်အဆုံးတွင်သိပ်မလှုပ်တော့ပါ။ သူတို့ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မုန်းလာနိုင်တယ်။ အမှုအရာအလွန်ဆိုးဆိုးရွားရွားအဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဟောင်းနှင့်အတူပြန်လာအလွန်ကြီးစွာသောဆနျ့ကငျြဘတစ်ခုဖြစ်သည်။
သိပ္ပံပညာကသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းနှင့်ပြန်လည်အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေမလေ့လာသည်ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းအားအမှန်တကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားရပြီးလုံးဝရပ်တန့်ခဲ့သောအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်လုံးဝဖြစ်နိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ သိပ္ပံပညာကကြာရှည်တဲ့အချိန်ကာလလို့ဆိုတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါ အချစ်ရှိသောဇနီးမောင်နှံကို ၆ လကြာခွဲထားရမည်။
စာရင်းအင်းများအရအဆုံးသတ်သောဆက်ဆံရေး၏သုံးပုံတစ်ပုံကျော်ကိုတစ်ချိန်ချိန်တွင်ဒုတိယအခွင့်အလမ်းပေးလိမ့်မည်ဟုပြသသည်။ များသောအားဖြင့်ဒုတိယအကြိမ်တွင်အခြေအနေများကွဲပြားသွားမည်ဖြစ်ရာအတိတ်၏အမှားများအားလုံးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုများသောအားဖြင့်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ အကောင်းမြင်ဝါဒသည်အခြားမိတ်ဖက်အသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်အတွက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ပျင်းရိခြင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရသောအချိန်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်းတို့သည်လူသိများသောစိတ်ခံစားမှုအရင်းအမြစ်များကိုစိတ်ထားဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » သင်၏ဟောင်းနှင့်အတူပြန်ယူပါ